Banyere anyị | WatercolorPNG
Ndị enyi abụọ Andrey na Vadim, ndị nwere nnukwu ọhụụ na mmepụta ihe, mmepụta na azụmaahịa azụlite WatercolorPNG na 2016. Ebumnuche anyị bụ ijikọta ndị ọkà mmụta nkà mmụta dị na Ukraine na okwu dijitalụ ma kwe ka ha ree ụlọ ọrụ ha niile gburugburu ụwa. Anyị malitere na ihe atụ ihe atụ nke ngwaahịa na mgbe ọtụtụ ọnwa nke ọrụ chịkọtara nnukwu nchịkọta ihe atụ ndị a na-emepụta na isiokwu botanical.
Anyị kere ụlọ ahịa anyị iji nye ahịa anyị ozugbo na ahịa ma nyere ndị mmadụ aka icho mma ha na nhazi elu na ọkwa ọnụ. Anyị na-ekepụta ihe dijitalụ ka ndị na-emepụta ihe nwere ike ibudata ma mepụta onwe ha ozugbo agbakwunyere, textures, ihe ntanye, okpokoro ma ọ bụ ókèala.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla maọbụ ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ pụrụ iche, biko mee ka anyị mara.